TTSweet: ဂျူဂျူလေးအတွက် Hawaiian pizza ...
Posted by T T Sweet at 11:32 PM
ဆုမြတ်မိုး February 18, 2011 at 2:37 AM
Anonymous February 18, 2011 at 3:06 AM
တို့လည်း ငပိရည်ပဲနော်..ဒီနေ့ဟင်းမချက် ထမင်းမစားရသေးပါဘူးဆိုမှ ဟင်းထချက်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ
ငွေစန္ဒာ February 18, 2011 at 4:00 AM
Hawaiian pizza အရမ်းကြိုက်တယ်။သူမှာရင်အမြဲအဲ့ဒါပဲ။
ကိုဇော် February 18, 2011 at 5:40 AM
ချိစ်ပီဇာကိုလည်း ကြိုက် ၊ ဆီးဖုလည်း ကြိုက် . .
အဟီး . . အကုန်ကြိုက်တာပါပဲဗျာ။
( ကိုဇော် ဘာလာလာ စားသည်ပေါ့ အိမ်က အမေ ပြောသလို )
မောင်ဝေး February 18, 2011 at 7:45 AM
ဒီလိုဟာမျိုး ဝယ်မရလို့လားဗျ၊ http://www.ragu.com/index.php/homemadepizza နောက်ကြုံရင် ဆိုင်မှာ ရှာကြည့်မေးကြည့်ပါအုံး။
မြူးမြူး February 18, 2011 at 10:35 AM
ဗမာပီပီ ငပိ တို့စရာတွေနဲ့ပဲ အ၀စားသွားပါတယ်.. ပီဇာကိုလဲ ညက်စောင်းလေးတော့ ထိုးသွားပါသေးတယ်..း)
ဖိုးတုတ် February 18, 2011 at 12:30 PM
၀က်သားခရမ်းသီးနှပ်က စားချင်စရာကြီး ၊ ငပိရည်က ထိုင်းငပိလား ဗမာ ငပိလား ? တို.စရာကလည်းကောင်းပါ့ ၊ မြန်မာ ထမင်း ဟင်းကို KFC, Pizza တို.ထက်ကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲ
ကျောက်ဇာ February 18, 2011 at 1:13 PM
ပီဇာတော့ ကြိုက်တယ်..အမြဲတော့ မစားချင်ပါဘူး..တခါတလေစားရင်တော့ အရသာရှိတယ်..
စန္ဒကူး February 18, 2011 at 2:05 PM
အပေါ်က ပီဇာထက်စွဲဆောင်မှုပိုပြင်းတဲ့ အောက်က ၀ိုင်းကိုဘဲငေးသွား တယ်။
Shinlay February 19, 2011 at 3:23 AM
၀က်သားခရမ်းသီးနှပ် ဆီကျန်ရေကျန်လေးချက်၊ ငပိရည် တို့စရာ..
လသာည February 19, 2011 at 8:01 PM
ဓါတ်ပုံတွေကို ဝေ့ကာဝိုက်ကာ ကြည့်ရင်း ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ရှိတဲ့မုန့် အရင်စားလိုက်ရတယ်း))
ဝက်ဝံလေး February 19, 2011 at 9:58 PM
မိုက်တယ်နော် ဟုတ်တယ် ဒီမှာတွေက ဝယ်စားရင် မတန်ဘူး ကိုယ်တိုင် လုပ်စားနိုင်ရင် ကောင်းကောင်းနဲ့သက်သက်သာသာစားရတယ် များကတော့ ပီဇာ မကြိုက်ဘူး ပြောရရင်အနောက်နိုင်ငံစာတွေမကြိုက်ဘူးရယ် ဒီမှာ စားတာဆိုလို့ ဘာဂါရယ် kfc ရယ်ပဲရှိတယ်
ဘာပဲပြောပြော လုပ်နည်းတော့မှတ်သွားတယ် ဟိဟိ
အပြုံးပန်း February 20, 2011 at 1:26 AM
ခရမ်းသီး ၀က်သားနဲ့ ငပိရည် တို့စရာကို စိတ်ဝင်စားတာ။
Here is the one of deal sites. Pls check. Today deal is $10 for $25 worth of pizza @ Rockys Pizza.
and u can check daily deals from here. Worth to buy.